လော်ရိုးရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ခန့်မှန်းချက်များ - SPORTS MYANMAR
လော်ရိုးရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ခန့်မှန်းချက်များ
နည်းပြ လောက နဲ့ ၁၁ လကြာ ဝေးကွာနေတဲ့ ဟိုဆေးမော်ရင်ညို ကတော့ တော့တင်ဟမ် နဲ့ အတူ ပရီးမီးယားလိဂ် ကို ပြန်လာပြီ ဖြစ်တာကြောင့် ပွဲစည်တော့မှာ သေချာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသင်းသစ်တွေနဲ့ ပထမဦးဆုံး ပွဲစဉ်တိုင်း ရလဒ်ကောင်းတာ များခဲ့တဲ့ မော်ရင်ညို အနေနဲ့ ဝက်ဟမ်း နဲ့ ပွဲမှာ နိုင်ပွဲနဲ့ စတင်ဖွင့်လှစ် သွားနိုင်မလား? ဒါ့အပြင် ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲကြီး ပွဲကောင်း ဖြစ်တဲ့ မန်စီးတီး နဲ့ ချဲလ်ဆီး တို့ရဲ့ ပွဲစဉ် ကလည်း နိုင်ငံတကာ ပွဲစဉ်တွေကြောင့် ကလပ် ပွဲတွေ ငတ်နေတဲ့ ပရိတ်သတ် တွေကို ဖြေဖျော်မှု အပြည့်အဝ ပေးစွမ်း နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၁၃ ကို ဘီဘီစီရဲ့ လော်ရိုးက ယခုလိုပဲ ခန့်မှန်း သုံးသပ် ပေးသွား ခဲ့ပါတယ်။
၁~ ဝက်ဟမ်း Vs တော့တင်ဟမ်
ကျွန်တော် ကတော့ စပါး တို့ မော်ရင်ညိုကို နည်းပြအဖြစ် ခန့်အပ် လိုက်တာ ကတော့ လောင်းကစားဆန်ဆန် စွန့်စားမှုလို့ပဲ ထင်နေ ပါတယ်။ စပါးဟာ မန်ယူနိုက်တက် နဲ့ ဇာတ်လမ်းပြတ် သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်တဲ့ အရမ်းကို ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်တဲ့ မန်နေဂျာ တစ်ဦးကို အစားထိုး လိုက်တာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံး အချိန်ကို မြင်ခဲ့ ပြီးပြီလားတောင် မသိပါဘူးဗျာ။ ဒါဟာ တော့တင်ဟမ်ရဲ့ ကစားဟန်ကို ထိခိုက်စေ မှာလား?
ဒါပေမယ့် တော့တင်ဟမ်ဟာ ပိုချက်တီနို ရဲ့ လက်အောက် ကလောက်တော့ ကစားပုံ ကောင်းချင်မှ ကောင်းမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ရေရှည်မှာ ဘာပဲ ဖြစ်နေဖြစ်နေ စနေနေ့ မှာတော့ မော်ရင်ညိုဟာ သူ့ရဲ့ ချည်းကပ်ပုံ အသစ် ၊ ပြောဆိုပုံ အသစ်တွေနဲ့ အတူ အသင်းသားတွေကို ချက်ချင်း တက်ကြွ နေစေမှာပါ။ စပါးတို့ ဘယ်လို ကစားသွား မလဲ ဆိုတာ ကတော့ စိတ်ဝင်စား စရာ ပါပဲ။ ဝက်ဟမ်းနဲ့ ပွဲက သူတို့ရဲ့ ခြေစွမ်းကို ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ ပြုလုပ်သွားမယ့် အပြောင်းအလဲတွေ ၊ ကစားကွက် နဲ့ သူတို့ရဲ့ ကစားဟန်ကို ပြောတာပါ။
လော်ရိုးရဲ့ ခန့်မှန်းချက် – ဝက်ဟမ်း ၁ – ၁ တော့တင်ဟမ်
၂~ အာဆင်နယ် Vs ဆောက်သမ်တန်
ဒီတစ်ပတ် အစမှာ ခင်ဗျား အနေနဲ့ ကလပ် အသင်းကြီး တစ်ခုခုရဲ့ မန်နေဂျာ တစ်ဦး ထုတ်ပယ် ခံရလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော့်ကို ပြောမယ် ဆိုရင် ကျွန်တော် ပထမဦးဆုံး ပြေးမြင်မိ မှာက အူနိုင်းအမ်မရီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ အာဆင်နယ် အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ လူအင်အား ၊ နောက်ဆုံး လိဂ်ပွဲစဉ် ၇ ပွဲမှာ ၁ မှတ်သာ ရယူ နိုင်ခဲ့ပြီး အခြေအနေ ဆိုးနေတဲ့ ဆောက်သမ်တန်နဲ့ ရင်ဆိုင် ရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် ဒီပွဲကို လွယ်ကူစွာနဲ့ နိုင်သွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စနေနေ့ည နိုင်ပွဲဟာ အာဆင်နယ် ရဲ့ ပြသနာတွေ ပြီးသွားမယ်လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ နောက်တန်းဟာ ပြသနာတွေ အများကြီး ရှိနေဆဲပါ။
လော်ရိုးရဲ့ ခန့်မှန်းချက် – အာဆင်နယ် ၂ – ၀ ဆောက်သမ်တန်
၃~ ခရစ်စတယ်ပဲလေ့စ် Vs လီဗာပူး
ပဲလေ့စ် နည်းပြ ဟော့ဆန် ကတော့ အသင်းဟောင်း နဲ့ ပြန်လည် ရင်ဆိုင် ရမှာ ဖြစ်ပြီး ဒါဟာ သူ နှစ်သက်မယ့် စမ်းသပ်မှုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဟော့ဆန်ရဲ့ အသင်းဟာ ဖိအားဒဏ်ကို ကြံံ့ကြံ့ခံကာ တန်ပြန် တိုက်စစ် နဲ့ ပြန်လည် ထိုးနှက်မှာရာ အရမ်း ကောင်းတဲ့ အသင်း ဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော် စိတ်ပူတာ ကတော့ သူတို့ဟာ လီဗာပူးကို နာကျင်စေမယ့် လုံလောက်တဲ့ စွမ်းအင် ရှိမနေတာ ပါပဲ။ သေချာတာ ကတော့ ဟော့ဆန် ဟာ လီဗာပူးကို အခက်အခဲ တွေ့စေမယ့် ကစားဟန် နဲ့ ပွဲထွက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲဟာ လီဗာပူး အတွက် လူတွေ ထင်တာထက် ကစားရကျပ်မယ့် ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပဲလေ့စ် တို့ တားဆီးနိုင်မယ် လို့တော့ ကျွန်တော် မထင်ပါဘူး။
လော်ရိုးရဲ့ ခန့်မှန်းချက် – ခရစ်စတယ်ပဲလေ့စ် ၀ – ၂ လီဗာပူး
၄~ မန်စီးတီး Vs ချဲလ်ဆီး
ချဲလ်ဆီးဟာ နောက်ဆုံး ကစား ခဲ့တဲ့ လိဂ်ပွဲစဉ် ၆ ပွဲ စလုံးကို အနိုင် ကစားထားခဲ့ပြီး အရမ်းကို ခြေစွမ်း ကောင်းနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မန်စီးတီး တို့ အိမ်ကွင်းမှာ အခြား အသင်းကြီး တစ်သင်း နဲ့ ရင်ဆိုင် ရတဲ့ အခါ ကျွန်တော် ကတော့ စီးတီးဘက်ကပဲ အမြဲ ထောက်ခံလေ့ ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ အမြဲတမ်း အပို လက်နက် တစ်ခု ရှိနေ ခဲ့ပြီး သူတို့ဟာ အိမ်ကွင်းမှာ အတော့်ကို ရှုံးခဲပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီကလို စီးတီး တို့ ချဲလ်ဆီး ကို ၆-၀ နဲ့ နိုင်ခဲ့သလိုမျိုးတော့ ထပ်မဖြစ် နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဂွာဒီယိုလာ ရဲ့ အသင်းပဲ နိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့် ထားဆဲပါ။
လော်ရိုးရဲ့ ခန့်မှန်းချက် – မန်စီးတီး ၂ – ၀ ချဲလ်ဆီး
၅~ ရှက်ဖီး Vs မန်ယူနိုက်တက်
ရှက်ဖီးဟာ ဒီရာသီ အရမ်းကို ကောင်းနေ ပေမယ့် မန်ယူနိုက်တက်ဟာ အန်သိုနီမာရှယ် ပြန်ပါလာတာကြောင့် ပိုမို ကောင်းမွန်နေတဲ့ အသင်း ဖြစ်လာ ခဲ့ပါတယ်။ မာရှယ်ဟာ ခြေစွမ်း အတက်အကျ အရမ်း မြန်တဲ့သူ ဆိုတာ ကျွန်တော် သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူကွင်းထဲမှာ ရှိနေခြင်းဟာ ခြားနားမှုကို ပေးစွမ်း နိုင်ပြီး ယူနိုက်တက်ရဲ့ အခြား တိုက်စစ် ကစားသမားတွေ ဖြစ်တဲ့ ဂျိမ်း နဲ့ ရပ်ဖို့ဒ် တို့ကလည်း ထက်မြက် နေကြပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်မှာ မန်နေဂျာ အချို့ဟာ သူတို့ရဲ့ အသင်းဟောင်းတွေ နဲ့ ရင်ဆိုင် နေရတယ်လို့ ကျွန်တော် ခုနက ပြောခဲ့ ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီပွဲဟာ ကစားသမား တစ်ဦး အတွက် အသင်းဟောင်းကို ပြန်လည် ရင်ဆိုင် ရတဲ့ ပွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မန်ယူနိုက်တက်ရဲ့ ဟယ်ရီမက်ဂွိုင်းယားဟာ ရှက်ဖီးမှာ ကစားသမား ဘဝ စတင် ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော် ကတော့ မက်ဂွိုင်းယား အနေနဲ့ အိမ်ကို ရမှတ်တွေနဲ့ ပြန်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
လော်ရိုးရဲ့ ခန့်မှန်းချက် – ရှက်ဖီး ၀ – ၂ မန်ယူနိုက်တက်
ဘုန်းမောက် ၂ – ၁ ဝုဖ်
ဘရိုက်တန် ၂ – ၁ လက်စတာ
အဲဗာတန် ၂ – ၀ နော့ဝှစ်
ဝက်ဖို့ဒ် ၂ – ၀ ဘန်လေ
အက်စတွန်ဗီလာ ၂ – ၀ နယူးကာဆယ်